Rega mabasa ekugadzirisa enguva dzose akuyeuchidze nezve Directive yeMac | Ndinobva mac
Rega zviitwa zvekuchengetedza zvenguva dzose zviyeuchidze nezve Directive yeMac
Manuel Alonso | 20/07/2021 20:00 | Zvimwe Zvirongwa zveMac
Kune zvimwe zviito muhupenyu hwedu zvinowanzoitika asi izvo dzimwe nguva zvinotitorera isu kuziva kuti misi yacho yakwana. Semuenzaniso, tiri kutaura nezve ongororo yegore rega yemota, kunyangwe ichitove mutariri wekutizivisa, asi kana usina iyo sarudzo unogona kudhonza chirongwa ichi cheMacOS icho chinoshandawo kune iOS. Saka iwe uchagara uine ziviso dzakagadzirira uye dzave pedyo. Directive zvinokubatsira iwe maneja iwo anofinha mabasa isu atisingowanzo kuita nekuda kwehusimbe.
Pane mabasa atinofanira kuita nguva nenguva asi pakati peimwe zuva neumwe, vanopedza nguva yakawanda. Dzimwe nguva tinokanganwa kuzviita uye pamwe pacho tinosvika pahusimbe zvekuti tinogara tichizvirega kusvika panguva yekupedzisira topedzisira tisisazviita nekuti zvinotipfuura. Asi neDirective izvo hazvichazoitika kwatiri. Ngatitenderei Mac yedu (kana iPhone kana iPad) tibatsire nemabasa aya.
Rakagadzirirwa kutibatsira kuti tigare tichifambirana nezvatinogara tichiita kuti tirege kugadzirisa zvinodhura. Directive inobatsira nekuchengetedza nzira nhatu huru:
Inoita Nyore kugadzirisa rangarira
Inosanganisira dzakawanda zve templates kukubatsira kumisikidza mabasa ekuchengetedza atinoda kupedzisa.
Tumira zviziviso kana yave nguva yekupedzisa maitiro ekugadzirisa.
Directive inotibvumidzawo chitoro ruzivo mune iyo app sefaira saizi kana mhando yemafuta anoshandiswa nemotokari yako, nezvimwe. Nekudaro, kana nguva yacho yasvika, tichaziva zvese zvatinoda panguva chaiyo chaiyo. Nemapombi akatiwandei anotibvumidza kunyoresa basa rapera, uye chirongwa ichi chinochengeta zvinyorwa zvacho, pamwe nezvinyorwa zvavakachengeta, uye zvobva zvaisa chiyeuchidzo chenguva inotevera yazvinofanirwa.
Sona uye imba.
Directive ndeye mahara kune iPhone, iPad uye Mac.Neizvi tinogona kuteedzera gumi akasiyana mabasa. Kuteedzera zvinopfuura gumi kunoda kukwidziridzwa kune Directive Pro. Iko kunyoreswa uko kunozoitwa patsva nemutengo wepagore wakaderera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Rega zviitwa zvekuchengetedza zvenguva dzose zviyeuchidze nezve Directive yeMac
Manage ako Mac mafaera zviri nyore neMarta
Sekureva kwaBloomberg: Apple inowedzera mumwe mwedzi wekuterevhiza kune vashandi vayo